IRoseberry Penthouse-Downtown-Deck, iiJongo kunye neTub eshushu
Wamkelekile, kwaye enkosi ngokusithathela ingqalelo kwiholide yakho elandelayo! Le ndlu isanda kulungiswa, ye-2nd yendlu inesiphelo esiphezulu kunye ne-twist yomtsalane wasekhaya. Ime kumbindi wedolophu yaseMcCall Idaho, amanyathelo nje asuka kwiindawo zokutyela, iipaki kunye nePayette Lake. Idesika yobungakanani beViking yindawo efanelekileyo yokonwabela iziqhushumbisi, iiparadi zasekhaya, kunye nexesha elisemgangathweni kunye nosapho kunye nabahlobo. Ixhotyiswe ngokupheleleyo ngebhafu eshushu kunye ne-bbq. Yonwabela indawo etofotofo, neyodwa yokubaleka kuwo onke amaxesha onyaka.
Ixhotyiswe ngokupheleleyo ekhitshini eliphezulu, intambo kunye ne-smart TV's, iBluetooth Stereo kunye neWIFI. Singasathethi ke ngeyona desika ibalaseleyo eMcCall, ibekwe kwindawo efanelekileyo ukuze ibonwe ngamehlo entaka kuzo zonke izinto ezenzekayo zikaMcCall.
Le propati iphakathi kwedolophu embindini wayo yonke into. Hamba uye kwiivenkile zokutyela kunye nechibi.
Ababuki zindwendwe basebenza kwindawo esezantsi kwiMcCall Sports Exchange kwaye bayafumaneka 9-6 ukwabelana ngolwazi lwabo lwendawo, kunye nokuseta ngezaphulelo kwizixhobo zokuzonwabisa zangaphandle ukusuka kwiibhayisekile ukuya kwi-SUP's.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- McCall